Tag: CheetahMail | Martech Zone
WedzeraShoppers: Yemagariro Commerce Mapuratifomu
Chipiri, Gunyana 24, 2013 Chipiri, Gunyana 24, 2013 Douglas Karr
AddShoppers mapurogiramu anokubatsira iwe kuwedzera mari yemagariro, wedzera kugovana mabhatani uye nekukupa iwe analytics yekuti magariro ari kukanganisa sei kutengeserana. AddShoppers inobatsira ecommerce vanopa kuti vawedzere vezvenhau kuti vawedzere kutengesa. Mabhatani avo ekugovana, mibairo yemagariro, uye zvekutenga zvekugovana maapplication zvinokubatsira iwe kuti uwane mamwe masocial share ayo anogona kuzoshanduka ave ekushambadzira munharaunda. AddShoppers analytics inobatsira iwe kuteedzera kudzoka kwako pane investment uye unzwisise kuti ndeapi magariro enharaunda anotendeuka. AddShoppers inowedzera vatengi kuita nekubatanidza